Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Ny dia amin'ny asa aman-draharaha dia hita fa mampientanentana antsika aorian'ny COVID US
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Mamokatra ny mpiasa ary tsy dia miady saina loatra rehefa mitety orinasa. Ampahefatra (25%) ihany no nilaza fa mahatsiaro ho voan'ny adin-tsaina kokoa izy ireo rehefa miasa mandritra ny dia ataon'ny orinasa iray, miaraka amin'ny 32% milaza fa tsy mahatsapa fahasamihafana izy ireo ary ny 43% ambiny dia mahatsiaro ho tsy dia miady saina loatra rehefa miasa mandritra ny diany.
Ny ampahatelon'ny mpiasa amerikana dia nilaza fa ny hevitra ara-barotra tsara indrindra dia mipoitra rehefa manao asa fandraharahana izy ireo.
Ny 26% amin'ny mpiasa amerikana irery no mieritreritra fa maty ny fihaonana mivantana.
74% amin'ireo mpiasa amerikana no mihevitra fa ilaina ny dia an-tany lavitra sy ny fivorian'ny olona manoloana ny ho avin'ny asa aman-draharaha.
Maherin'ny antsasaky ny (53%) mpiasa amerikana no mieritreritra ny filan'izy ireo dia mila fivorian'olona mivantana mba hahatafitana velona, ​​fandinihana vaovao no hita.
Ny fanadihadiana nataon'ny mpiasa amerikana 1,000 dia nanadihady ny fihetsika manoloana ny fivorian'ny asa sy ny dia ataon'ny orinasa. Nambara izany fa ny 26% amin'ny mpiasa ihany no mihevitra fa ny fihaonana mivantana dia maty, ary ny 74% sisa tavela amin'ny fivoriana mivantana dia fanalahidin'ny ho avin'ny asa aman-draharaha.
Ny antsasaky ny (53%) dia milaza fa mora kokoa ny matoky ny varotra ataon'ny olona amin'ny Internet, miaraka amin'ny 64% milaza fa ny lakilen'ny fahatokisana dia ny fifandraisan'olombelona. Ary koa ny fitomboan'ny fitokisana rehefa mihaona manokana, ny fanadihadiana dia nanasongadina ny fomba mahomby kokoa amin'ny fandehanana any amin'ireo fivorian'ny olona - 60% amin'ny US Nilaza ny mpiasa fa miomana bebe kokoa amin'ny fivoriana manokana izy ireo noho ny amin'ny fivoriana virtoaly.
Ny fanadihadiana dia nijery ny fomba fijery ankapobeny fitsangatsanganana orinasa, mahita fa ny ankamaroan'ny mpiasa dia dodona ny hiverina hanao dia lavitra. 41% no nilaza fa mahita ny fivezivezena amin'ny orinasa ho fampiroboroboana bebe kokoa hatramin'ny areti-mandringana, miaraka amin'ny 40% milaza fa manan-danja amin'izy ireo ny fivezivezena rehefa mitady asa vaovao. Nasongadiny fa mazoto maniry ny hanao dia lavitra ny taranaka faralahy, miaraka amin'ny antsasaky ny (54%) an'ny 16-24 taona milaza fa mampientanentana kokoa ny dia amin'ny raharaham-barotra nanomboka tamin'ny areti-mandringana, raha oharina amin'ny 13% fotsiny tamin'ny 55 mahery. Ary koa ny faniriana traikefa an-tsokosoko bebe kokoa, ireo zandriny tanora dia mahita aingam-panahy kokoa ny dia. Ny antsasaky ny (53%) an'ny Gen Z dia milaza fa ny hevitra ara-barotra tsara indrindra dia mitranga rehefa mandeha, raha ampitahaina amin'ny latsaky ny fahadimy (18%) mihoatra ny 55 taona.
Ny fandinihana dia nijery ihany koa ny fahazarana mandany vola, manasongadina izay tsapan'ny olona fa mahazo vola rehefa mandeha miasa. Nahita ny olona mahazo aina indrindra amin'ny fandaniana sakafo, miaraka amin'ny 83% milaza fa hangataka sakafo any amin'ny trano fisakafoanana izy ireo. Midina izany rehefa mijery serivisy any amin'ny efitrano, ary 57% ihany no mahazo aina amin'ny fandaniana zavatra efa nandidiany tao amin'ny efitranony. Ampahefatry ny mpiasa (26%) fotsiny no hahatsapa ho mahazo aina amin'ny fandaniana alikaola samirery, miaraka amin'ireo lehilahy mahazo aina kokoa noho ny vehivavy (16% vs 8%) ary ny Gen Z ary ireo millennial dia mahazo aina kokoa noho ny 55 taona mahery (36% vs 9%).
Ny sakafo dia mijanona ho lohalaharana amin'ny lisitra rehefa mijery ny laharam-pahamehan'ny mpiasa rehefa mandeha. 72% no te-hisakafo hariva mandritra ny dia ataon'ny orinasa, miaraka amin'ny 69% te-hijanona amin'ny hotely mahafinaritra ary mihoatra ny antsasaky (55%) te-hitsidika ireo fizahantany mpizahatany eo an-toerana. Ny fitsidihana gym dia tsy dia malaza loatra (24%), raha mihoatra ny ampahatelony (39%) te hiala alina rehefa mandeha manao asa aman-draharaha. Fandinihana indostria, hita fa ny HR no biby fety lehibe indrindra, miaraka amin'ny 56% milaza fa laharam-pahamehana ny fitsangatsanganana rehefa mitsidika toerana vaovao ho an'ny orinasa.
Taorian'ny herintaona nisian'ny asa lavitra sy namboarina, nisy ny fifanakalozan-kevitra momba ny trano na ny birao no mahasoa indrindra an'ireo mpiasa. maro US mpiasa milaza fitsangatsanganana orinasa dia mampientanentana kokoa noho ny hatramin'izay. Raha ny marina dia 34% no nilaza fa manana ny heviny tsara indrindra izy ireo rehefa mandeha miasa, mampiseho ny maha-aingam-panahy azy hivoaka amin'izao tontolo izao sy ny fihaonana amin'ireo olona mifandray aminy.
Na dia mora aza ny fahafaha-mitsambikina amin'ny antso Zoom ho an'ny fivoriana tsy dia ilaina loatra ary tokony ekena, mazàna ny hevitra tsara indrindra, ny fifandraisana tsara indrindra - ary ny vokatra tsara indrindra - dia mitranga rehefa mandeha sy mifanatrika mivantana ny olona.